Gịnị kpatara BLI? - Ụlọ akwụkwọ asụsụ BLI · na Canada
Enwere ụzọ ka mma isi mụta asụsụ karịa ibi ndụ ya? BLI anaghị eche otú ahụ. Nke a bụ ihe mere e ji kee ihe ọmụmụ anyị niile na nke ndị French iji gboo mkpa na ọdịmma nke ụmụ akwụkwọ, na-adabere na njedebe dị omimi na nkwurịta okwu nke ga - enye aka na ụmụ akwụkwọ ahụ ga - abụ ndị maara asụsụ, ma ha ga - enyekwa ha ihe mgbaru ọsọ iji nwee ọganihu na ọkwa zuru ụwa ọnụ. BLI na-eme ka ihe omumu nke okwu di mkpa maka ndu gi n'inwe otutu ihe bara uru karia ihe i chere. Ịgbasawanye nhọrọ gị ma mee ka i nwekwuo ihe ịga nke ọma bụ ihe anyị na-ebute na BLI.
BLI na-ewere usoro mmụta asụsụ na-abụghị klas, site n'inye ụmụ akwụkwọ ahụ ọtụtụ ụdị ntụrụndụ na-akpali mmasị na usoro omume Homestay nke ga-ekwe ka ụmụ akwụkwọ ahụ nweta ahụmịhe mmụta ha na ọkwa ọzọ, ịmụta ezi ụwa. Akụkụ ọzọ nke ahụmịhe mmụta mmụta BLI na-emezi ma na-ahazi ihe omume ga-enyere ụmụ akwụkwọ ahụ aka ịmụta ihe gbasara ọdịmma onwe ha, na gburugburu ebe obibi enyi, na ohere iji soro ụmụ akwụkwọ BLI ibe gị si n'akụkụ ụwa nile.
Kemgbe ihe karịrị afọ iri atọ na isii, anyị enyerela ọtụtụ puku ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ ụwa nile iji mezuo nrọ ha na ịghọ ụmụ amaala zuru ụwa ọnụ. Onye ọ bụla n'ime anyị, ndị nkụzi BLI, ndị nchịkwa na ndị nhazi, na-atụ anya ịnakwere gị n'otu ụlọ akwụkwọ anyị na ịnọnyere gị n'akụkụ ahụmahụ dị ukwuu nke ndụ: "ịmụta asụsụ mba ọzọ".
Emeela Nwee Ihe Ịga nke Ọma